Wafdi uu hogaaminayo ugaaska Beesha Sade oo gaaray kismaayo | KEYDMEDIA ONLINE
Wafdi uu hogaaminayo ugaaska Beesha Sade oo gaaray kismaayo
Muqdisho (KON) Magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose ayaa waxaa gaaray Wafdi balaaran oo horkacayay ugaaska Beelaha Sade Ugaas Maxamed Ugaas Xaashi waxaana kusoo dhaweeyay garoonka Kismaayo masuuliyiinta maamulka KMG ah ee magaalada Kismaayo iyo qaar kamid ah Ergooyinka ku xaraysan Jaamacadda Kismaayo.
Wafdigani ayaa waxay ka yimaadeen magaalada Doolow ee gobolka Gedo halkasi oo mudooyinkii ugu danbeeyay ay ku sugnaayeen sida uu sheegay Sheekh Maxamed Daa’uud Codwayne oo ka tirsan gudiga Farsamada Shirka maamul u samaynta Jubbooyinka.
Wararka ayaa sheegaya in xubnahaan ay magaalada Kismaayo u yimaadeen in ay la kulmaan maamulka Axmed Madoobe isla markaana ay isla arkaan wixii ay go’aan ku soo gaareen mudadii ay joogeen Doolow, maadama ay yihiin dadka Malaya gobalka Gedo.
Siyaasiyiin iyo masuuliyiin ka soo jeeda gobalka Gedo ayaa horay kaga soo horjeestay shirka magaalada Kismaayo, waxayna ku sheegeen in shirkaan uu yahay mid aanan loo dhamayn.
Waxaa xiligaan lasugayaa hadii ay jiraan wax iska badalay masuuliyiinta gobalka Gedo Mowqifkoodii hore, xili maalmihii la soo dhaafay ay lahaayeen shirar gooni gooni ah.